Inona no dikan'ny hoe ao amin'i Kristy? - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Fiainana miaraka amin'Andriamanitra > Inona no dikan'ny hoe ao amin'i Kristy?
Teny iray izay nohenoantsika taloha. Albert Schweitzer dia nilaza fa ny ao amin'i Kristy no mistery lehibe tamin'ny fampianaran'ny apostoly Paoly. Ary farany dia tsy maintsy nahalala i Schweitzer. Amin'ny teolojia malaza, mpitendry mozika ary dokotera manan-danja malaza, ny Alsatian dia iray tamin'ireo Alemà niavaka tamin'ny taonjato faha-20. Tamin'ny 1952 izy no nomena ny Loka Nobel. Ao amin'ny bokiny The Mysticism of the Apostol Paul, izay navoaka tamin'ny 1931, Schweitzer dia manantitrantitra ny lafiny manan-danja fa ny fiainana kristiana ao amin'i Kristy dia tsy Andriamanitra-mysticismisme, fa, raha ny filazany azy tenany dia Kristy-mysticismisme. Ny fivavahana hafa, anisan'izany ny mpaminany, ny mpahay tantara na ny filozofa - na inona na inona endriny - mitady "Andriamanitra". Fa i Schweitzer dia nanaiky fa ho an'i Paul ilay fanantenana kristiana sy ny fiainana andavan'andro dia manana endrika manokana voafaritra sy voafaritra manokana - izany hoe fiainana vaovao ao amin'i Kristy.
Ao amin’ny taratasiny i Paoly dia mampiasa ny fitenenana hoe “ao amin’i Kristy” tsy latsaky ny im. Ohatra tsara amin'izany ny andalana manorina ao amin'ny 2. Korintiana 5,17: « Koa raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny taloha, indro, tonga ny vaovao. Tsy Kristianina ortodoksa i Albert Schweitzer tamin’ny farany, saingy vitsy ny olona namariparitra ny toe-tsaina kristiana tamin’ny fomba miavaka kokoa noho izy. Nofintininy tamin’izao teny izao ny hevitry ny apostoly Paoly momba izany: “Ho azy [Paoly] ny mpino no havotana amin’ny alalan’ny fidirany amin’ny toetra mihoatra ny natoraly amin’ny fiombonana amin’i Kristy amin’ny alalan’ny fahafatesana sy fitsanganana amin’ny maty mifono zava-miafina miaraka Aminy efa any amin’ny tontolo voajanahary. fotoana izay hitoeran’izy ireo ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra. Amin’ny alalan’i Kristy no esorina amin’izao tontolo izao isika ary apetraka ao amin’ny fomban’ny fanjakan’Andriamanitra, na dia tsy mbola niseho aza izany ... » (The Mysticism of the Apostle Paul, p. 369).
Mariho ny fomba nanehoan’i Schweitzer fa hitan’i Paoly ireo lafiny roa amin’ny fiavian’i Kristy mifandray amin’ny fihenjanana amin’ny andro farany — ny fanjakan’Andriamanitra amin’izao fiainana izao sy ny fahatanterahan’izany amin’ny fiainana ho avy. Mety tsy ho tian'ny sasany izany rehefa mitabataba amin'ny teny toy ny hoe "mistisisma" sy "mistisisma Kristy" ny Kristianina ary mifampiraharaha amin'i Albert Schweitzer amin'ny fomba tsy dia mahazatra loatra; tsy iadian-kevitra anefa fa i Paoly dia azo antoka fa sady nahita maso no mistery. Nanana fahitana sy fanambarana betsaka kokoa noho ny mpiangona rehetra izy (2. Korintiana 12,1-7). Ahoana no ifandraisan’izany rehetra izany amin’ny fomba mivaingana ary ahoana no hampifanaraka izany amin’ilay zava-nitranga manan-danja indrindra teo amin’ny tantaran’ny olombelona — ny fitsanganan’i Jesosy Kristy tamin’ny maty?
Ny lanitra efa?
Mba hilazana azy hatrany am-piandohana, ny foto-kevitra momba ny mystika dia zava-dehibe amin'ny fahatakarana ireo andalan-teny mahay mandaha-teny toy ny Romana. 6,3-8 Ny tena zava-dehibe: “Sa tsy fantatrareo fa izay rehetra atao batisa ho amin’i Kristy Jesosy dia atao batisa ho amin’ny fahafatesany? Koa niara-nalevina taminy tamin’ny batisa ho amin’ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana an’i Kristy tamin’ny maty tamin’ny voninahitry ny Ray no handehanantsika amin’ny fiainam-baovao koa. Fa raha miray aminy isika ka tonga tahaka Azy amin'ny fahafatesany, dia ho tahaka Azy koa amin'ny fitsanganana amin'ny maty ... Fa raha niara-maty tamin'i Kristy isika, dia mino fa hiara-belona aminy koa isika ... »
Izany no Paoly araka ny ahafantarantsika azy. Hitany fa ny fitsanganana amin’ny maty no fototry ny fampianarana kristianina. Tsy alevina ara-panoharana miaraka amin’i Kristy amin’ny alalan’ny batisa fotsiny ny Kristianina, fa mizara an’ohatra koa ny fitsanganana amin’ny maty miaraka aminy. Saingy eto dia mihoatra lavitra noho ny votoaty an'ohatra fotsiny izany. Ity teolojia misaraka ity dia miaraka amin'ny ampahany tsara amin'ny zava-misy henjana. Jereo ny fomba niresahan’i Paoly an’io foto-kevitra io tao amin’ny taratasiny ho an’ny Efesiana in 2. Manazava toy izao koa ny toko faha-4-6: “Fa Andriamanitra, Izay manan-karena amin’ny famindram-po, amin’ny halehiben’ny fitiavany ... dia nahavelona antsika niaraka tamin’i Kristy koa, izay efa maty tamin’ny ota, ary ny fahasoavana no namonjena anareo, ary nanangana antsika Izy. miaraka aminay ka ametrahana anay any an-danitra ao amin’i Kristy Jesosy.” Nanao ahoana izy tao? Vakio indray: Voatokana any an-danitra ao amin’i Kristy ve isika?
Ahoana no mety hitranga? Eny ary, ny tenin'ny apostoly Paoly dia tsy midika ara-bakiteny sy mifanipaka eto, fa amin'ny fampianarany, tena mifototra amin'ny heviny. Nohazavainy fa noho ny herin'Andriamanitra hanome famonjena, izay naseho tamin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty, dia afaka mahazo mankafy ny fandraisana anjara amin'ny fanjakan'ny lanitra, fonenan'Andriamanitra sy Kristy, amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Izany dia ampanantenaina antsika amin'ny fiainana ao amin'i Kristy, ny nitsanganany sy ny fiakarany. Izany rehetra izany dia azo atao satria ao amin'i Kristy. Azontsika atao ny miantso an'io fahitana io hoe ny fitsipiky ny fitsanganana amin'ny maty na ny fitsanganana amin'ny maty.
Ny antony fitsanganana amin'ny maty
Averina indray, afaka mahita afa-tsy ny fahatongavan'ny hery mpamily izay avy amin'ny fitsanganan'ny Tompontsika sy Mpamonjy antsika isika, mahafantatra fa tsy io ihany no zava-dehibe ara-tantara indrindra, fa koa ny leitmotif ho an'ny zavatra rehetra atolotry ny mpino an'ity tontolo ity. manantena ary mety hantenaina. "Ao amin'i Kristy" dia fanehoana mystika, fa raha ny dikany lehibe kokoa, dia mihoatra lavitra noho ny toetra ara-panoharana fotsiny izany. Mifandraika akaiky amin'ilay fehezanteny mistika "ampiasaina any an-danitra" izany.
Jereo ny fanamarihana lehibe momba ny Efesianina avy amin’ny sasany amin’ireo mpanoratra Baiboly niavaka indrindra 2,6 eo imasonao. Ao amin'ity Max Turner manaraka ity ao amin'ny The New Bible Commentary ao amin'ny version of the 2nd1. Century: "Ny filazana fa niara-natsangana tamin'i Kristy isika dia toa ny dikan-teny fohy amin'ny filazana fa hiara-hitsangana amin'i Kristy ho amin'ny fiainana vaovao isika", ary azo lazaina fa efa nitranga izany satria ny zava-nitranga manan-danja. Ny voalohany, ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty dia efa lasa ary, faharoa, dia efa manomboka mandray anjara amin'izany fiainana vao noforonina izany isika amin'ny alalan'ny fiombonantsika aminy ankehitriny ”(p. 1229).
Tafaray amin’i Kristy isika, mazava ho azy, amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Izany no mahatonga ny tontolon'ny eritreritra ao ambadik'ireo hevitra faran'izay ambony ireo dia tsy azon'ny mino afa-tsy amin'ny alalan'ny Fanahy Masina ihany. 2,6 ao amin’ny Testamenta Vaovao Tyndale: “Ao amin’ny Efesianina 1,3 Nilaza ny apostoly fa Andriamanitra ao amin’i Kristy dia nitahy antsika tamin’ny fitahiana ara-panahy rehetra any an-danitra. Izao no lazainy fa eo izao ny fiainantsika, naorina ho amin’ny fanapahana any an-danitra miaraka amin’i Kristy... Noho ny fandresen’i Kristy ny ota sy ny fahafatesana ary koa tamin’ny fisandratany, dia nesorina avy tao amin’ny helo lalina indrindra ho any an-danitra ny olombelona’ (Calvin). Manana zo sivily any an-danitra isika ankehitriny (Filipianina 3,20); ary any, afaka amin’ny fetra sy fetra apetraky ny izao tontolo izao ... misy ny tena fiainana »(p. 82).
Niresaka momba ny Efesianina i John Stott, ao amin’ilay bokiny hoe Ny Hafatry ny Efesiana 2,6 toy izao: “Ny mahagaga anay anefa dia ny hoe tsy momba an’i Kristy no nosoratan’i Paoly, fa momba antsika. Tsy manamarina fa Andriamanitra nanangana an’i Kristy sy nanandratra sy nametraka Azy ho amin’ny fanapahana any an-danitra, fa Izy niaraka tamin’i Kristy kosa nanangana antsika sy nanandratra antsika ary nametraka antsika ho amin’ny fanapahana any an-danitra... fototry ny Kristianisma ao amin’ny Testamenta Vaovao. Amin'ny maha-vahoaka 'ao amin'i Kristy' dia manana firaisankina vaovao izy ireo. Noho ny fiombonany amin’i Kristy dia tena mandray anjara tokoa amin’ny fitsanganany amin’ny maty sy ny fiakarany ary ny rafitra izy”.
Miaraka amin'ny "institution", Stott dia manondro ny maha-tompon'i Kristy amin'ny zavaboary rehetra amin'ny heviny ara-teolojia. Noho izany, araka ny voalazan’i Stott, ireo resaka rehetra momba ny fitondrantsika miaraka amin’i Kristy ireo dia tsy “mistisisma kristiana tsy misy dikany” koa. Fa kosa, ampahany manan-danja amin'ny mistika kristiana izy io ary mihoatra noho izany aza. Nanampy toy izao i Stott: “‘Any an-danitra’, ilay tontolo tsy hita maso misy ny zava-misy ara-panahy, izay misy hery sy fahefana manjaka (3,10;6,12ary i Kristy no manapaka ny zavatra rehetra (1,20), Andriamanitra nitahy ny olony ao amin’i Kristy (1,3) ary nanorina izany niaraka tamin’i Kristy ho amin’ny fanapahana any an-danitra ... Fijoroana ho vavolombelona araka ny nofo izany fa nomen’i Kristy fiainam-baovao isika amin’ny lafiny iray ary fandresena vaovao amin’ny lafiny iray. Efa maty izahay, nefa natao ho velona sy ho mailo ara-panahy. Tany amin’ny fahababoana isika, fa natao ho amin’ny fanapahana any an-danitra.”
Marina i Max Turner. Amin'ireto teny ireto dia misy mihoatra ny sary an'ohatra madio - araka ny mystika toa io fampianarana io. Izay nohazavain'i Paoly eto dia ny tena dikan'ny, lalina kokoa ny dikan'ny fiainantsika vaovao ao amin'i Kristy. Amin'izany toe-javatra izany, lafiny telo farafaharatsiny tokony hodinihina.
Ny fiantraikany azo ampiharina
Voalohany indrindra aloha, raha ny mikasika ny famonjena azy ireo dia ny kristiana "tsara araka ny alehany". Ireo "ao amin'i Kristy" dia voavela amin'ny fahotan'i Kristy. Mizara ny fahafatesana, fandevenana, fitsanganana amin'ny maty, ary fiakarana miaraka aminy izy ireo ary, amin'ny fotoana iray dia efa niara-niaina taminy tao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ity fampianarana ity dia tsy tokony ho fantsom-panahy mety indrindra. Izy io dia niresaka tamin'ny Kristiana niaina tao anatin'ny toe-piainana mahatsiravina indrindra tany amin'ireo tanàna mpanao kolikoly izay tsy manana zo sivily sy politika izay matetika tsy ekentsika. Ho an'ny mpamaky ny Apôstôly Paoly, ny fahafatesan'ny sabatra romana dia tanteraka tanteraka, na dia tsy tokony hohadinoina aza fa ny ankamaroan'ny olona tamin'izany fotoana izany dia 40 na 45 taona ihany.
Noho izany i Paoly dia mamporisika ny mpamaky azy amin’ny eritreritra hafa nindramina avy amin’ny fotopampianarana fototra sy ny toetra mampiavaka ny finoana vaovao — ny fitsanganan’i Kristy tamin’ny maty. Ny hoe “ao amin’i Kristy” dia midika fa rehefa mijery antsika Andriamanitra dia tsy hitany ny fahotantsika. Mahita an’i Kristy izy. Tsy misy lesona afaka manome antsika fanantenana bebe kokoa! Ao amin’ny Kolosiana 3,3 tsindriana indray izany: “Fa efa maty hianareo, ary ny fiainanareo miara-miafina amin’i Kristy ao amin’Andriamanitra” (Zurich Bible).
Faharoa, ny hoe "ao amin'i Kristy" dia midika hoe miaina kristiana amin'ny tontolo roa samy hafa - eto amin'ity tontolon'ny zava-misy ity sy amin'ny "tontolo tsy hita maso", misy zavamisy ara-panahy, araka ny niantsoan'i Stott azy. Misy fiantraikany amin'ny fomba hitantsika an'ity tontolo ity izany. Toy izao ny fomba tokony hiainantsika fiainana izay manao ny rariny ho an'ity tontolo roa ity, izay anjarantsika voalohany ny fahatokiana dia ny fanjakan'Andriamanitra sy ny soatoaviny, fa amin'ny lafiny iray, tsy tokony hihoatra lavitra noho izany isika tsy manompo ny fiainana eto an-tany. Izy io dia ety an-tongotra ary ny kristiana rehetra dia mila ny fanampian'Andriamanitra mba ho tafita soa aman-tsara.
Fahatelo, ny hoe "ao amin'i Kristy" dia midika fa fandresena amin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika. Raha nanao izany rehetra izany ny Ray any an-danitra, dia manome endrika ny toeran'ny Fanjakan'ny lanitra isika, midika izany fa tokony hiaina amin'ny maha-mpitondra tenin'i Kristy antsika isika.
I Francis Foulkes dia nametraka azy toy izao: eny fa na dia amin’ny fijoroany ho vavolombelona amin’izao tontolo izao aza. Tokony hijoro ho vavolom-belona kosa ny mpiara-monina amin'ny fahendrena sy fitiavana ary fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Kristy ”(p. 82).
Inona no marina. Mba ho "ao amin'i Kristy", handray ny fanomezan'ny fiainana vaovao ao amin'i Kristy, hahalala ny fahotantsika miafina amin'Andriamanitra amin'Andriamanitra amin'ny alalany - izany rehetra izany dia tokony hanana fitondran-tena Kristiana manoloana ny olona iarahantsika. Isika Kristiana dia mety miova fomba samihafa, fa amin'ny olona izay iainantsika eto an-tany dia mihaona amin'ny fanahin'i Kristy isika. Miaraka amin'ny fitsanganan'ny Mpamonjy tamin'ny maty dia tsy nomen'Andriamanitra famantarana ny maha-izy azy isika, hany ka lasa zava-poana isika, fa mijoro ho vavolombelon'izany hatsaram-panahy izany isan'andro ary amin'ny alalan'ny ataontsika, dia mampiseho famantarana ny fisiany sy ny fikarakarana tsy misy fetra ho an'ny rehetra apetraho izao tontolo izao. Ny fitsanganan'i Kristy sy ny fiakaran'i Kristy dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fihetsitsika manoloana an'izao tontolo izao. Ny fanamby tsy maintsy atrehintsika dia ny miaina mifanaraka amin'izany laza izany 24 ora isan'andro.